Nokia 6.3 ga-abata na Snapdragon 670/675 na ZEISS quad igwefoto | Gam akporosis
HMD Global Ọ nọ na-arụ ọrụ na ọdụ ọhụrụ maka ogologo oge, nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ahịa niile ọ na-arụ ọrụ. Ọ dịghị mfe ịlụ ọgụ megide ndị nrụpụta ndị ọzọ, nke ụlọ ọrụ Finnish maara nke ga-aga n'ihu na atụmatụ nke imelite akara njedebe ya na 2020 niile.
Achọpụtala akụkọ ọhụrụ Nokia 6.3, mmalite nke Nokia 6.2 a maara nke ọma na nke ahụ ga-abata na nkeji nke atọ nke 2020. Ọ ga-abụ ekwentị ntinye, na-echekwa ọtụtụ myirịta na imewe na njirimara nke Nokia 5.3 nke ụlọ ọrụ ahụ malitere na March .
1 Nokia 6.2 nyocha mbụ
Nokia 6.2 nyocha mbụ
Site na ozi a, ekpughere ọtụtụ nkọwa nke Nokia 6.2, otu n'ime ha bụ na ọ ga-etinye usoro nhazi usoro Snapdragon 6, na-arụ ọrụ na Snapdragon 670 ma ọ bụ 675. Ihe dị iche n'etiti otu na nke ọzọ abụghị nke ukwuu, ọ bụ ezie na edepụtara SD675 maka arụmọrụ dị mma na egwuregwu vidiyo ma e jiri ya tụnyere ụdị SD670.
Na azụ m ga-ahọrọ maka igwefoto quad anọ na anya mbinye aka ZEISS, igwefoto selfie ga-abịa na ọkwa mmiri iyi na ihe mmetụta 16-megapixel. Igwefoto azụ anaghị enye nkọwapụta Onye Ọrụ Nokia Ike, mana ha na-achọpụta na ha ga-adị elu iji were foto na vidiyo dị mma.
El Nokia 6.3 ga-akụ nzọ na pureDisplay panel, nha ga-adị ihe dị ka sentimita 6,3 na mkpebi Full HD + ma nwee nnukwu ọdịiche. Ugbua n'ime ikpe ahụ ọ ga-akwadebe 3 GB nke ebe nchekwa RAM na nchekwa nke 64 GB, ihe niile na-egosi na enwere ike ịgbasa ya site na kaadị MicroSD.
N'aka nke ọzọ, isi iyi na-emesi obi ike na Nokia 6.3 ọnụahịa ga-abụ ihe dị ka euro 249Ọ dị elu karịa ma e jiri ya tụnyere ọdụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ ahụ kwalitere afọ a. Companylọ ọrụ ahụ ga-ebupụta ya oge ụfọdụ na nkeji nke atọ nke 2020 ma ọ gaghị abịa naanị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 6.3 ga-abata na Snapdragon 670/675 na igwe ojii quad ZEISS
OnePlus 7 na 7 Pro na-enweta OxygenOS Open Beta 13 na ihe nchebe nchekwa nke Eprel